तेलमा डुबेका २ बर्षे शिशिर खड्कालाई भेट्दा अनुभव रेग्मी धुरुधुरु रोए ! पुरै कपडा खोल्दा यस्तो देखियो (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > तेलमा डुबेका २ बर्षे शिशिर खड्कालाई भेट्दा अनुभव रेग्मी धुरुधुरु रोए ! पुरै कपडा खोल्दा यस्तो देखियो (भिडियो हेर्नुस)
admin February 23, 2019 समाचार 0
नमस्कार म शिशिर भण्डारी.. अर्को एउटा दुखद भिडियो लिएर आएको छु । यो भिडियो हेर्ने जति सबैले लाईक गरारैं अनि पुरा भिडियो हेरेर सबैले सेयर गरौं । सबै नेपाली मांझ पुर्याऊं है । गरिब परिवारले शिशिरको उपचारका लागि हालसम्म १२ लाख भन्दा माथि खर्चिसकेको छ । ऋण गरेर छोराको जीवन बचाएका शिशिरको आमा बुवाको रुंदा रुंदा आंशु रित्तिसक्यो । शिशिरको आमा उनको पहिलेको फोटो हेर्नै सक्दिनन् । त्यो दुर्घटनापछि शिशिर झनक्क रिसाउने भएका छन् । आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दै घरभरीका सबै ऐना फुटाईसके । उनलाई आफु भुत जस्तो लाग्छ रे । अहिलेदेखि नै आफ्नो अनुहार प्रति उनलाई ठुलो घृणा छ ।
यसैबिच चर्चित बाल कलाकार शिशिर बाबुलाई भेट्न गए । उनीसँगै आमा कविता रेग्मी र बाबा अरुण रेग्मी पनि पुगेका थिए । हामीले शिशिर बाबुलाई २ लाख ३६ हजार सहयोग दिँदा अनुभवको परिवारले पनि आफुले सकेको सहयोग गर्नुभयो । त्यसैबिच अनुभव निकै भक्कानिएर रोए । भिडियो हेर्नुस
ट्रकले एक खुट्टा लगिदिएपछि अपाङ्ग हुनुकाे पीडा र सिकाएकाे जीवन भोगाई… निलमकाे मन रूवाउने यस्तो छ कहानी – भिडियो सहित
सञ्चारमाध्यमको सिद्धान्त विपरीतका सामग्री प्रसारण गर्ने युट्युबलाई कारवाहीकाे माग
एमाले नेताको मृत्यु , असल अभिभावक गुमाएको भन्दै शोक